Sidee ayuu Manifold u joogayaa raqiis - Geofumadas
Waa kuwan qaar ka mid ah gabagabadii aan gaaray markii aan gaadhay istaraatijiyadda loo isticmaalo kala cayncayn ah inay joogaan qiimo raqiis ah, maaha inay sheegaan wax qarsoodi ah oo ku saabsan fursaddooda. Runta ayaa ah in ganacsiga tiknoolajiyada
Ma siinayaan buug daabacan, Buuggan waa digital ... ay ku doodayaan in la beddelo dunida farsamada, ka dhigi a daabacaadda buuggan fiican khatar ah iyo in ay ku taameysid ayaan dooneynin inuu halis $ 50 dollars in dari karaysaa buugga qiimaha kama dambaysta ah. Buugga in digital ku dhowaad furfuraya waxa heshiisyo leeyihiin buug online iyo hadda ... haddii qof uu doonayo, waxaad ka daabacan kartaa bogagga 3,400 Buugga digital.
Ma siinayaan sanduuq, Markaad internetka iibsato, waxa ay kuu soo dirayaan waa isku xir si aad u soo dejiso wax soo saarka waxayna kuu soo diraan furayaasha si aad u dhaqaajiso liisamada. Waxay ku doodayaan in diraya sanduuq la saxannada gudaha, iyo maraakiibta dhignaan kartaa si fudud $ 45 iyo kharashka maraakiibta, oo ka fiirso dunida geek maanta waxa ay ka hortagi kartid ... ah, haddii aad rabto DVD ah, iyada oo ay Baakadaha iyo qiimaha rasmiga ah $ 11 iyo kharashka maraakiibta. Waa wax qosol leh in uu jiro hage bilow ah oo leh saddex tallaabo: 1 Ku rakib, 2. Halkaan, 3. Baro
Ma haystaan ​​iibiyeyaasha, waxaad kaliya ku iibsan kartaa internetka. Waxa aad ka heli waa damaanad maalmood 30 marka aad soo celin kartaa lacagtaada haddii aadan ku qanacsanayn sheyga. Laakiinse iyagu ma ay leeyihiin resellers dunida oo dhan, ku dooday in tani guud ahaan kordhiyaa by 50% kharashka guddiga waxyaabaha reseller iyo canshuurta oo ah dal kasta. Tani waxay xaddideysaa tababarka oo waxay ina siinaysaa fursado aan ku siin karno taageero iyo hirgelin.
Ma laha adeeg taageero caadi ahMarka aad iibsato shati aad xaq u leedahay labada su'aalood ee taageerada rasmiga ah sidaa darteed waxaa in aad is ogow sida rabitaanka hanad ee Aladdin. ka dib markii, lagu siiyo halkii su'aasha, sidaas darteed waxaa jira forums user midba midka kale caawiyo, iyo blogs sidan oo kale in ay ku siiyaan talo oo lacag la'aan ah :). Si aad u taariikhda waxaan leeyahay wax aan su'aalo dhawrsan markii aan soo iibsaday liisanka, laakiin waxa uu si adag u qaniino i weydiiso wax hoose qodax sida: Onda Que la versions of V8 DGN iyo sanadka billabo ka dib 2005.
Ha u ogolaanin ruqsadaha biyaha meel kastaMarka version cusub kor socdaalka by $ 50 si aadan in la fikirka ah ee isticmaala oo la versions of 3 sano ka hor joogay.
Ha u dhicin qof kasta, sidaa daraadeed ma iibsadaan horumarinta kooxda saddexaad haddii ay iyagu iskood u samayn karaan, ma guursanayaan qof walba, IIS haa, RedHat maaha ...
Aan ku dari karno marka ay suurta gal tahay markaa haddii Manifold uu soo bandhigo dhamaan miro-biyoodka:
Qaybta Shakhsiyadeed ee Ugu Yar yar $ 245.00
Hagaha la daabacay iyo tusaha isticmaalaha $ 55.00
Sanduuq xiran, faashad asal ah $ 45.00
Guddiga Deggaha $ 400.00
Adeegga Taageerada $ 110.00
Adeegga Taageerada ee liisamada hore $ 55.00
Canshuurta deegaanka $ 125.00
Qalabka iyo maraakiibta qiimaha $ 45.00
Ku saabsan kharashka shirkad sawir leh $ 370.00
Wadarta ................................................ .. $ 1,450.00
By fursad, ma aha in qiimaha ArcGIS Desktop?
blog Dgn Dwg GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Manifold GIS, soo koobid ugu fiican
Post Next Maalin farxad leh πNext »